Basikety – Coupe du Président Top 8 : mitana ny lohany ny Cospn, GNBC, MB2All | NewsMada
Basikety – Coupe du Président Top 8 : mitana ny lohany ny Cospn, GNBC, MB2All
Hangotraka tanteraka ny lalao ampahefa-dalan’ny fiadiana ny “Top 8” amin’ny “Coupe du Président” amin’ity. Tonga amin’ny tsontsori-mamba hisarahana ireo ekipa valo tafakatra tamin’ny “Top 8”. Mitana ny lohany ny Cospn sy ny GNBC ary ny MB2All.
Cospn (Analamanga) sy GNVB (Vakinankaratra) eo amin’ny lehilahy ary ny MB2All (Analamanga) ny eo amin’ny vehivavy. Ireo no mitana ny lohany taorian’ny fifanintsanana amin’ny “Top 8” amin’ny fiadiana ny “Coupe du Président”, andiany faharoa, eo amin’ny taranja basikety. Fifaninanana mizotra amin’izao fotoana izao, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ary eo ambany fiahian’ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery.
Tontosa, omaly, mantsy ny fifanintsanana isam-bondrona eo amin’ny sokajy lehilahy sy ny fiadiana filaharana eo amin’ny sokajy vehivavy. Araka izany, hangotraka tanteraka ireo lalao ampahefa-dalana eo amin’ny lehilahy raha manasa-dalana avy hatrany kosa ny eo amin’ny vehivavy.
Eo amin’ny sokajy lehilahy manokana, ny Cospn no mitarika eo amin’ny vondrona “A” arahin’ny Ascut (Atsinanana) eo amin’ny laharana faharoa. Mitana ny laharana fahatelo ny Cosfa (Analamanga) ary fahefatra ny TTS (Amoron’i Mania). Ny GNBC indray ny eo amin’ny vondrona “B” arahin’ny SBBC (Boeny) eo amin’ny laharana faharoa. Fahatelo ny 2BC (Vakinankaratra) ary fahefatra ny Challenger (Analamanga).
Ankoatra izay, eo amin’ny vehivavy, tsy nisy afa-tsy ekipa efatra ihany no hiady ny lohany tamin’ity. Araka izany, ny MB2All no mitana ny lohany arahin’ny Fandrefiala (Analamanga) eo amin’ny laharana faharoa. Fahatelo ny JEA (Vakinankaratra) ary fahefatra ny BFT (Analamanga).
Marihina fa hotanterahina ny alakamisy 24 marsa izao ireo lalao ampahefa-dalana hatrany amin’ny famaranana, ny asabotsy 26 marsa. Izany hoe, fakan’aina ho an’ireo mpandray anjara ny anio.
Cospn (Analamanga) # Challenger (Analamanga)
GNBC (Vakinankaratra) # TTS (Amoron’i Mania)
SBBC (Boeny) # Cosfa (Analamanga)
2BC (Vakinankaratra) # Ascut (Atsinanana)